Yesu Nam Nnipa Kakra so Ma Mpempem Aduan | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“[Yesu] bubuu mu kyekyɛ maa asuafo no na asuafo no nso kyekyɛ maa nnipakuw no.”—MAT. 14:19.
Ɔkwan bɛn na na Yesu fa so ma nnipadɔm aduan?
Adwuma bɛn na Yesu de asomafo ne mpanyimfo a wɔwɔ Yerusalem no yɛe?
Bere bɛn na Kristo paw wɔn a wɔde honhom fam aduan bɛma?
1-3. Ɔkwan bɛn na Yesu faa so maa nnipadɔm bi aduan wɔ Betsaida mpɔtam? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
WO DE, twa ho mfonini hwɛ. (Monkenkan Mateo 14:14-21.) Ná ɛyɛ afe 32 Y.B mu. Saa bere no na aka kakra ma Twam afahyɛ no adu so. Na mmarima bɛyɛ 5,000 ne Yesu ne n’asuafo wɔ Betsaida mpɔtam baabi wɔ Galilea mpoano. Mmea ne mmofra mpo de wɔankan wɔn anka ho.
2 Bere a Yesu huu nnipadɔm no, ne yam hyehyee no maa wɔn. Enti ɔsaa ayarefo a wɔwom yare na ɔkaa Onyankopɔn Ahenni ho nsɛm pii kyerɛɛ wɔn. Bere a onwini dwoe no, asuafo no ka kyerɛɛ Yesu sɛ onnyaw nkurɔfo no kwan ma wɔnkɔ nkuraa a ɛbemmɛn hɔ nkɔpɛ aduan bi ntɔ nni. Nanso Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Momma wɔn biribi nni.” Ɛbɛyɛ sɛ Yesu asɛm no yɛɛ asuafo no nwonwa kakra, efisɛ na paanoo anum ne mpataa abien pɛ na wɔwɔ.
3 Nkurɔfo no asɛm yɛɛ Yesu mmɔbɔ, enti epusuw no ma ɔyɛɛ anwonwade bi. Eyi ne anwonwade a Nsɛmpa anan no nyinaa ka ho asɛm. (Mar. 6:35-44; Luka 9:10-17; Yoh. 6:1-13) Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ wɔmma nkurɔfo no ntenatena sare no so akuwakuw, aduonum aduonum, ne ɔha ɔha. Afei ohyiraa paanoo ne mpataa no so bubuu mu. Yesu wiei no, ɔno ankasa amfa amma nkurɔfo no, na mmom ɔkyekyɛ “maa asuafo no na asuafo no nso kyekyɛ maa nnipakuw no.” Anwonwasɛm, aduan no buu so araa ma nnipa no antumi anni mpo! Susuw asɛm no ho: Yesu nam n’asuafo kakra no so maa mpempem aduan. *
4. (a) Aduan bɛn na na ehia Yesu sɛ ɔde bɛma, na dɛn ntia? (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua yi ne nea edi hɔ no mu?
4 Nea na ehia Yesu mpo ne sɛ ɔbɛma n’akyidifo honhom fam aduan. Na onim sɛ honhom fam aduan anaa nokwasɛm a ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm mu no na ɛma daa nkwa. (Yoh. 6:26, 27; 17:3) Ayamhyehye a ɛkaa Yesu ma ɔmaa nnipadɔm no paanoo ne mpataa no, ɛno ara na ɛkaa no ma ɔde nnɔnhwerew pii kyerɛkyerɛɛ n’akyidifo no. (Mar. 6:34) Nanso na onim sɛ ne nkwa nna a aka ma wafi asase so akɔ soro yɛ tiaa. (Mat. 16:21; Yoh. 14:12) Ɛnde, bere a Yesu wɔ soro no, ɔbɛyɛ dɛn ama n’akyidifo a wɔwɔ asase so anya honhom fam aduan adi amee? Sɛnea ɔnam nnipa kakra so maa mpempem aduan no, saa ara na ɔbɛfa nnipa kakra so ama n’akyidifo aduan. Henanom ne nnipa kakra a ɔnam wɔn so bɛma mpempem aduan no? Momma yɛnhwɛ sɛnea Yesu faa nnipa kakraa bi so maa n’akyidifo pii a wɔasra wɔn aduan wɔ asomafo no bere so. Afei adesua a edi hɔ no, yɛbɛhwɛ asɛm bi a ɛho hia yɛn mu biara. Ɛne sɛ, yɛbɛyɛ dɛn ahu nnipa kakra a Kristo nam wɔn so rema yɛn aduan nnɛ?
Wɔnam nnipa kakraa bi so maa mpempem aduan (Hwɛ nkyekyɛm 4)
YESU PAW NNIPA KAKRAA BI
5, 6. (a) Gyinae titiriw bɛn na Yesu sii sɛnea ɛbɛyɛ a ne wu akyi no n’akyidifo benya honhom fam aduan adi amee? (b) Dɛn na Yesu yɛe de siesiee n’asomafo maa adwuma a wɔbɛyɛ wɔ ne wu akyi?
5 Sɛ obi yɛ abusua ti na n’abusua ho hia no a, ɔbɛtoto nneɛma yiye na sɛ daakye ɔda na wansɔre a, n’abusua anyɛ mmɔbɔ. Na Yesu na ɔbɛba abɛyɛ Kristofo asafo no Ti, enti ɔno nso de nneɛma guu akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ a ne wu akyi no, n’akyidifo bɛkɔ so anya honhom fam aduan. (Efe. 1:22) Wo de yɛnhwɛ, aka bɛyɛ mfe abien ma Yesu awu no, osii gyinae bi a emu yɛ duru paa. Ofii ase paw nnipa kakraa bi a ne kɔ akyi no ɔbɛfa wɔn so ama mpempem aduan. Hwɛ nea ɔyɛe.
6 Yesu bɔɔ mpae anadwo mũ nyinaa; afei ɔfrɛɛ n’asuafo nyinaa, na ɔpaw wɔn mu 12 yɛɛ wɔn asomafo. (Luka 6:12-16) Mfe abien a edi hɔ deɛ, wankɔ annyaw asomafo 12 no koraa. Ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn, na ɔno ankasa yɛɛ nhwɛso maa wɔn. Na onim sɛ 12 no wɔ nneɛma pii sua. Nokwasɛm ne sɛ saa bere no nyinaa na wɔfrɛ wɔn “asuafo.” (Mat. 11:1; 20:17) Ɔmaa wɔn afotu pii a na ɛbɛboa wɔn, na ɔsan gyee bere tetee wɔn wɔ asɛnka adwuma no mu. (Mat. 10:1-42; 20:20-23; Luka 8:1; 9:52-55) Ɔyɛɛ eyi nyinaa de siesiee wɔn na sɛ owu kɔ soro a, ɔde adwumasono bi ahyɛ wɔn nsa.
7. Ɔkwan bɛn so na Yesu ma yehu ade titiriw a na asomafo no de besi wɔn ani so?
7 Adwuma bɛn na na asomafo no bɛyɛ? Aka kakra ma Pentekoste 33 Y.B. aba no, na biribiara kyerɛ sɛ asomafo no na wɔbɛyɛ ‘ahwɛfo adwuma’ no. (Aso. 1:20) Nanso dɛn na wɔde besi wɔn ani so paa? Yesu wusɔre akyi no, ɔne ɔsomafo Petro bɔɔ nkɔmmɔ bi, na eyi boa ma yenya asɛmmisa no ho mmuae. (Monkenkan Yohane 21:1, 2, 15-17.) Yesu ka kyerɛɛ Petro wɔ asomafo no bi anim sɛ: “Ma me nguan nkumaa aduan.” Yesu asɛm yi kyerɛ sɛ ɔnam n’asomafo kakra no so de honhom fam aduan bɛma mpempem. Eyi ma yehu sɛ na Yesu ani kũ ne “nguan nkumaa” no ho paa! *.
EFI PENTEKOSTE NO WƆMAA MPEMPEM ADUAN
8. Dɛn na wɔn a wɔbɛyɛɛ Kristofo wɔ Pentekoste no yɛe a ɛkyerɛ sɛ wonim wɔn a Kristo nam wɔn so ma honhom fam aduan?
8 Efi Pentekoste 33 Y.B. mu no, Kristo a wɔanyan no no nam n’asomafo no so maa n’asuafo a aka a wɔasra wɔn no aduan. (Monkenkan Asomafo Nnwuma 2:41, 42.) Yudafo ne amanaman mufo a wɔabegye Yudasom atom a wɔde honhom sraa wɔn saa da no hui sɛ asomafo no so na Yesu nam ma honhom fam aduan. Enti ntɛm ara “wɔkɔɔ so tuu wɔn ho sii hɔ maa asomafo no nkyerɛkyerɛ.” Ɔbenfo bi kae sɛ Hela asɛm a wɔkyerɛɛ ase “wɔkɔɔ so tuu wɔn ho sii hɔ” no kyerɛ sɛnea “obi de n’adwene nyinaa si biribi so a ɔmman mfi ho.” Ná wɔn a wɔabɛyɛ Kristofo foforo no kɔn dɔ honhom fam aduan, na na wonim baabi a wobenya saa aduan no. Wɔde wɔn ho nyinaa too asomafo no so ma wɔkyerɛkyerɛɛ wɔn Yesu anom nsɛm ne ne nnwuma ne ne ho nsɛm a ɛwɔ Kyerɛwnsɛm no mu. *—Aso. 2:22-36.
9. Dɛn na asomafo no yɛe a ɛkyerɛ sɛ nea na esi wɔn ani so paa ne sɛ wɔbɛma Yesu nguan no aduan?
9 Na nea esi asomafo no ani so ara ne sɛ wɔbɛma Yesu nguan no aduan. Yɛnhwɛ sɛnea asomafo no dii asɛm bi ho dwuma wɔ asafo foforo no mu. Eyi yɛ biribi a anka ebetumi de mpaapaemu aba. Ná ɛfa honam fam aduan ho. Bere a wɔrekyekyɛ aduan ama akunafo no, na wɔn a wɔkyekyɛ aduan no abu wɔn ani agu akunafo a wɔka Hela kasa so nanso akunafo a wɔka Hebri kasa de, na wonya nea wɔpɛ. Ɔkwan bɛn na asomafo no faa so siesiee asɛm no? “Dumien no” paw mmarima baason a wɔfata ma wɔhwɛɛ “adwuma a ɛho hia” anaa aduan kyekyɛ no so. Bere a Yesu faa anwonwakwan so maa nnipadɔm bi aduan no, yebetumi aka sɛ na asomafo yi mu dodow no ara ka ho bi na wɔkyekyɛɛ aduan no. Nanso saa bere yi deɛ, asomafo no hui sɛ nea ehia paa ne sɛ wɔde wɔn adwene besi honhom fam aduan so. Enti wotuu wɔn ho sii hɔ maa “Onyankopɔn asɛm no nkyerɛkyerɛ.”—Aso. 6:1-6.
10. Adwuma bɛn na Kristo nam asomafo no ne mpanyimfo a wɔwɔ Yerusalem no so yɛe?
10 Eduu afe 49 Y.B. no, na mpanyimfo foforo abɛka asomafo a wɔte ase no ho. (Monkenkan Asomafo Nnwuma 15:1, 2.) Saa bere no, na “asomafo no ne mpanyimfo a wɔwɔ Yerusalem” no na wobom yɛ akwankyerɛ kuw no. Kristo ne asafo no Ti, enti ɔnam mmarima kakra yi so siesiee nsɛm a ɛfa Kristofo gyidi ho na wɔhwɛɛ Ahenni asɛmpaka ne ɔkyerɛkyerɛ adwuma no so.—Aso. 15:6-29; 21:17-19; Kol. 1:18.
11, 12. (a) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Yehowa hyiraa nhyehyɛe a ne Ba no nam so maa asafo a na ɛwɔ asomafo no bere so aduan? (b) Ɛyɛɛ dɛn na nkurɔfo huu wɔn a na Kristo nam wɔn so ma honhom fam aduan no?
11 Yehowa hyiraa ɔkwan a ne Ba no faa so de aduan maa asafo ahorow a na ɛwɔ asomafo no bere so anaa? Yebetumi aka no pen sɛ ohyiraa so! Yɛyɛ dɛn hu saa? Wo de, hwɛ nea esii bere a ɔsomafo Paulo ne ne mfɛfo de akwankyerɛ kuw no gyinaesi bi too gua no. Asomafo nhoma no ka sɛ: “Afei bere a wɔnam nkurow no so no, wɔde mmara a asomafo no ne mpanyimfo a wɔwɔ Yerusalem asi ho gyinae no maa wɔn sɛ wonni so. Enti asafo ahorow no kɔɔ so yɛɛ den gyidi mu na wɔn dodow kɔɔ anim daa.” (Aso. 16:4, 5) Hyɛ no nsow sɛ bere a asafo no yɛɛ aso tiee akwankyerɛ kuw a ɛwɔ Yerusalem no, esii wɔn yiye. Sɛ eyi nkyerɛ sɛ Yehowa hyiraa nhyehyɛe a ne Ba no nam so maa asafo ahorow no aduan a, dɛn bio? Momma yɛnkae sɛ Yehowa nhyira na ɛma ne nkurɔfo tumi som no yiye na wonya nkɔso.—Mmeb. 10:22; 1 Kor. 3:6, 7.
12 Ɛde besi ha yi yɛahu sɛ ɔkwan a Yesu faa so de honam fam aduan maa nnipadɔm no, saa kwan no ara na ɔfaa so maa n’akyidifo honhom fam aduan: Ɔnam nnipa kakraa bi so maa mpempem aduan. Ná ɛnyɛ den sɛ nkurɔfo behu wɔn a ɔnam wɔn so ma honhom fam aduan. Sɛ yɛhwɛ a, akwankyerɛ kuw a edi kan anaa asomafo no tumi yɛɛ nneɛma bi maa nkurɔfo hui sɛ Yehowa taa wɔn akyi. Asomafo Nnwuma 5:12 ka sɛ: “Wɔnam asomafo no so yɛɛ nsɛnkyerɛnne ne anwonwade afoforo bebree wɔ nnipa no mu.” * Enti ɛnyɛ ade a na Kristoni biara bɛhaw ne ho abisa sɛ, ‘Henanom koraa na Kristo nam wɔn so ma ne nguan aduan?’ Nanso asomafo no wu akyi no, nneɛma sesae.
Asomafo no bere so no, na ɛnyɛ den sɛ nkurɔfo behu wɔn a Yesu nam wɔn so ma asafo no aduan (Hwɛ nkyekyɛm 12)
BERE A NWURA BƆNE BUNKAM AWI NO SO
13, 14. (a) Dɛn na Yesu kae sɛ ɛbɛto Kristofo asafo no? Bere bɛn na asɛm a ɔkae no baam? (b) Akuw abien bɛn na wotuu wɔn ani sii asafo no so? (Hwɛ awiei asɛm no.)
13 Yesu hyɛɛ nkɔm sɛ nkurɔfo betu wɔn ani asi Kristofo asafo no so. Kae sɛ bere a Yesu reyɛ mfatoho a ɛfa awi ne nwura bɔne ho no, ɔkae sɛ nwura bɔne (kyerɛ sɛ atoro Kristofo) bebunkam awi (kyerɛ sɛ Kristofo a wɔasra wɔn) no so. Yesu kae sɛ wɔmma awi (anaa ayuo) ne nwura bɔne no mmom nyin nkosi twabere, kyerɛ sɛ “wiase nhyehyɛe no awiei.” (Mat. 13:24-30, 36-43) Yesu hyɛɛ nkɔm no, ankyɛ na efii ase baam. *
14 Awaefo yii wɔn ti wɔ asomafo no bere so, nanso Yesu asomafo anokwafo no ‘siw wɔn kwan.’ Wɔamma kwan amma awaefo no amfa atoro nkyerɛkyerɛ annidi asafo no ase. (2 Tes. 2:3, 6, 7) Nanso bere a ɔsomafo a otwa to wui no, awaefo maa wɔn homene so, na wogyee nhin. Eyi kɔɔ so mfe pii. Saa bere no nwura bɔne no bunkam awi no so. Enti na nhyehyɛe pɔtee biara nni hɔ a wɔfa so ma honhom fam aduan. Ná eyi bɛsesa. Nanso asɛm no ne sɛ, Bere bɛn?
HENA NA ƆBƐMA ADUAN OTWABERE?
15, 16. Bere a Bible Asuafo tweetwee Kyerɛwnsɛm no mu no, dɛn na efii mu bae? Asɛmmisa bɛn na ɛsɔre?
15 Aka kakra ma otwabere no aso no, nnipa bi fii ase tweetwee Bible mu pɛe sɛ wohu nokware no. Kae sɛ afe 1870 akyi hɔ baabi no, nnipa bi a na wɔn ani abere rehwehwɛ nokware no kaa wɔn ho boom suaa Bible no. Saa bere no, na wɔfrɛ wɔn ho Bible Asuafo. Wɔtwee wɔn ho fii nwura bɔne no ho, kyerɛ sɛ atoro Kristofo a na wɔwɔ asɔre ahorow ne Kristoman akuw horow mu no. Ná Bible Asuafo no brɛ wɔn ho ase, na wobuee wɔn komam sɛ wɔbɛhwehwɛ Bible mu nokware no. Enti wɔbɔɔ mpae tɔɔ wɔn bo ase tweetwee Kyerɛwnsɛm no mu.—Mat. 11:25.
16 Anibere a Bible Asuafo no de suaa Bible no sow aba. Wɔpaa atoro som ho ntama na wɔbɔɔ nokware no dawuru. Wotintim Bible ho nhoma kyekyɛ kɔɔ apuei ne atɔe, atifi ne anafo. Nsɛm a na wɔde nam no kaa nnipa pii koma, efisɛ na nokware no ho kɔm ne sukɔm de wɔn. Eyi ma asɛmmisa bi sɔre. Ɛne sɛ Bible Asuafo a na wɔwɔ hɔ ansa na 1914 reba no na Kristo paw wɔn sɛ wɔmma ne nguan aduan anaa? Mmuae no yɛ dabi. Saa bere no nyinaa na nwura bɔne ne awi no gu so renyin, na na nhyehyɛe a Kristo bɛfa so ama honhom fam aduan no nnyee ntini. Ná bere nsoe sɛ wobeyi nwura bɔne anaa atoro Kristofo no afi nokware Kristofo anaa awi no mu.
17. Efi 1914 no, nsɛntitiriw bɛn na esisii?
17 Yehui wɔ adesua a edi eyi anim mu sɛ otwabere no fii ase 1914. Efi saa afe no reba no, nneɛma akɛse akɛse bi sisii. Wosii Yesu hene, na nna a edi akyiri no fii ase. (Adi. 11:15) Efi afe 1914 kosi afe 1919 mfiase no, Yesu kaa n’Agya ho baa honhom fam asɔrefie hɔ bɛhwɛɛ sɛnea nneɛma te, na ɔtew hɔ. * (Mal. 3:1-4) Efi 1919 no, wofii ase boaboaa awi no ano. Ɛnde, yemmisa sɛ, na bere aso sɛ Kristo paw wɔn a wɔbɛma honhom fam aduan no anaa? Yiw, na bere aso!
18. Ɛhefo na Yesu kae sɛ ɔbɛpaw wɔn? Bere a nna a edi akyiri no refi ase no, asɛmmisa titiriw bɛn na ɛsɔree?
18 Bere a Yesu rehyɛ awiei no ho nkɔm no, ɔkyerɛe sɛ ɔbɛpaw wɔn a wɔbɛma honhom fam “aduan bere a ɛsɛ mu.” (Mat. 24:45-47) Henanom na na ɔde wɔn bɛyɛ saa adwuma no? Ná Yesu bɛsan afa nnipa kakra so ama mpempem aduan sɛnea ɔyɛe wɔ asomafo no bere so no. Nanso bere a nna a edi akyiri no refi ase no, asɛmmisa a na ehia ne sɛ, Nnipa kakra bɛn na ɔbɛfa wɔn so ama aduan no? Yebenya saa asɛmmisa yi ne nsɛmmisa foforo ho mmuae wɔ adesua a edi hɔ no mu.
^ nky. 3 Nkyekyɛm 3: Bere foforo nso Yesu nam anwonwakwan so maa mmarima 4,000 aduan. (Wɔankan mmea ne mmofra anka ho.) Saa bere no nso ɔde aduan no “maa asuafo no, na asuafo no nso kyekyɛ maa nnipa no.”—Mat. 15:32-38.
^ nky. 7 Nkyekyɛm 7: Petro bere so no, na “nguan nkumaa” a ɛsɛ sɛ ɔma wɔn aduan no nyinaa wɔ anidaso sɛ wɔbɛkɔ soro.
^ nky. 8 Nkyekyɛm 8: Bible ka sɛ Kristofo foforo no ‘kɔɔ so tuu wɔn ho sii hɔ maa asomafo no nkyerɛkyerɛ.’ Enti yebetumi aka sɛ na asomafo no kyerɛkyerɛ daa. Ɛnnɛ, yehu asomafo no nkyerɛkyerɛ no bi wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu.
^ nky. 12 Nkyekyɛm 12: Asomafo no akyi no, afoforo nso nyaa honhom akyɛde no. Nanso ɛkame ayɛ sɛ mpɛn pii no asomafo no ankasa na wɔde honhom akyɛde no maa afoforo anaa wɔn nsa kae bere a ɔsomafo bi wɔ hɔ.—Aso. 8:14-18; 10:44, 45.
^ nky. 13 Nkyekyɛm 13: Asɛm a ɔsomafo Paulo kae wɔ Asomafo Nnwuma 20:29, 30 ma yehu sɛ akuw abien na na ebetu wɔn ani asi asafo no so. Nea edi kan, na atoro Kristofo (“nwura bɔne”) “bɛhyɛn” nokware Kristofo asafo no mu. Nea ɛto so abien, awaefo befi nokware Kristofo no ‘ara mu’ aba. Saafo no bɛkasa “akyinkyim nsɛm.”
^ nky. 17 Nkyekyɛm 17: Hwɛ adesua a wɔato din “Hwɛ! Me Ne Mo Wɔ Hɔ Nna Nyinaa” wɔ Ɔwɛn-Aban yi kratafa 11, nkyekyɛm 6.